क्यानको पारदर्शितामाथि प्रश्न - Khelpati
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को मंगलबार बोर्ड बैठक बस्यो ।
तर, बोर्ड बैठक र बैठकमा उठाइएका र पेश गरिएका विषयलाई क्यानले सार्वजनिक गरेन । त्यसको केही दिनपछि क्यानको बोर्ड बैठकले महिला र पुरुषतर्फका दुबै खेलाडीलाई प्रति अन्तराष्ट्रिय खेल बापत भत्ता दिने निर्णय गर्यो ।
क्यानको नयाँ आर्थिक कार्यविधिले प्रदेश र जिल्ला संघलाई पनि प्रशासनिक खर्च बापत रकम दिने निर्णय गरेको छ । तर, यस विषयमा क्यानले कुनै सूचना सार्वजनिक नगरेकोले क्यानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान लेख क्षेत्रीले क्यानको बोर्ड बैठक लगत्तै आफ्नो आधिकारिक कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी दिनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सबैको चासोका विषय भएकाले क्यानको निर्णय अहिले सम्म आधिकारिक जानकारी नभएको बताए ।
'बोर्ड बैठक बस्यो भनेको छ । केही नियमावली र कार्यविधि पारित भए पनि भनिएको छ । ति सबै कुरा बाहिरबाट सुनिदै छ । तर, आफ्नो बोर्ड बैठककै कुरा क्यानले आधिकारिक विज्ञप्ति मार्फत अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन्,’ पूर्व कप्तान क्षेत्रीले भने, 'हामी पारदर्शिताका कुरा गर्दै छौ । कहाँ छ पारदर्शिता ?’
उनले आर्थिक कार्यविधि तयार समितिमा कार्यसमिति भित्रकै व्यक्ति रहेकाले बोर्ड बैठकभन्दा फोनकै आधारमा कार्यविधि पारित भएको हुन सक्ने आरोप लगाए । उनले बैठकमै पनि कार्यसमितिकै व्यक्तिहरुले तयार पारेकाले त्यस विषयमा छलफल नभई एकहोरो प्रस्तुत र पारित गर्ने कार्य भएको बताएका छन् ।
पूर्व कप्तान क्षेत्रीले क्यानले जिल्ला संघलाई एक लाख र प्रदेश संघलाई तीन लाख दिने निर्णय प्रति समेत आपत्ति नजाए । उनले यस विषयमा क्यानको अध्ययन नपुगेको आरोप लगाए ।
‘क्यानले प्रदेश संघलाई तीन लाख र जिल्ला संघलाई एक लाख दिने भन्ने निर्णय बाहिरिएको छ । प्रदेश संघलाई के आधारमा तीन लाख दिने ? देश संघियतामा गएकाले प्रदेश संघ एक पुल मात्रै हो । काम सबै त जिल्ला गर्छ,’ उनले भने, 'प्रदेश संघका लागि २१ लाख खर्च हुँन आउछ । तर, त्यस बराबरको काम कारबाही के हुने ?’
क्यानले अध्ययन विना निर्णय गरेको भन्दै यस निर्णयलाई सच्चाउनु पर्ने क्षेत्रीको धारणा छ । उनले चुनाव र भोटका लागि मात्र नभई क्रिकेट विकासका लागि सबैले अग्रसर गर्नु पर्ने बताए ।
उनले थपे, 'जिल्ला संघलाई एक लाख दिने निर्णय छ । अब दार्चुला र दाङको जिल्ला संघलाई समान रकम दिने निर्णय गरेर हुन्छ । यसमा पनि कार्य शैली, व्यस्तता, उत्पादन र गतिविधिका आधारमा जिल्ला संघलाई समेट्नु पर्ने हो । काम गर्ने र नगर्ने सबै संघ एउटै कसरी ? यसको विषयमा क्यानले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्दैन् ? यसले त क्यानको ३७ लाख त्यस्तै खेर जान्छ । क्यानले गर्नै पर्ने काम गरेको हो । तर, अध्ययन विना ।’
यता क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले कार्यसमितिको १८ महिनाको मिहिनेत र अध्ययनले नयाँ आर्थिक कार्यविधि तयार पारेको बताए । उनले कार्यविधिमा केही बुँदा सच्चाउनु पर्ने समेत रहेको जानकारी दिए ।
श्रीलंकाका तीन खेलाडीलाई प्रतिबन्ध
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट उडानाको सन्यास
स्टोक्सलाई सोध्नु कति गाह्रो छ खेलिरहन
क्रिकेटबाट विश्राम लिने स्टोक्सको घोषणा